ဇေရေ ပုံပြင် ပြောပြမယ်နော်…။ ကလေးအတွေး ဆန်တာတော့ ဟုတ်ဘူး ။ ငါ့တူမလေးအတွက် ပုံပြင်စာအုပ်လေးဝယ်လာတော့ ကျွန်မအရင်ဆုံးဖတ်ကြည့်တာပေါ့ ။ အဲမှာ ဘဲရုပ်ဆိုးဆိုတဲ့ ပုံပြင်လေးကို ဖတ်မိတယ် …။ ကဲစပြောပြီနော်…
တစ်ခါက ရေအိုင်တစ်အိုင်ရဲ့ အစပ်မှာ ဘဲမကြီးတကောင်ဟာ ဥတွေကို ဥထားပြီး ဥတွေကိ်ု ၀ပ်သတဲ့ ။ ဥတွေကို ၀ပ်ပြီး အတော်ကြာတော့ ဘဲဥတွေ တစ်လုံးပြီးတစ်လုံး ချပ်ခနဲ့ ချပ်ခနဲ ပေါက်လာကြသတဲ့ ။ ဘဲဥခွံထဲက ဘဲကလေးတွေဟာ ခေါင်းလေးတွေ ပြူထွက်လာကြတာပေါ့ ။ ဘဲမကြီးကလဲ ဘဲလေးတွေပေါက်လာလို့ ပျော်ပြီး ဂပ် ဂပ် ဂပ် ဂပ် နဲ့ အော်သတဲ့ ။
ဘဲမကြီးဝပ်တဲ့ ဥတွေအကုန်ပေါက်ပင်မဲ့ ဥတစ်လုံးတော့ ကျန်သေးသတဲ့ ..။ ဘဲမကြီးကလဲ ဒီကျန်တဲ့ ဥတွေကြောင့် စိတ်ဆင်းရဲနေတာပေါ့ ။ ဒီဥပေါက်အောင်ဝပ်ရ မှာကိုး ။ ဒါနဲ့ပဲ ဘဲမကြီးဟာ ဒီဥပေါက်ဖို့ နောက်ရက်အကြာကြီးဝပ်ရပြန်သတဲ့ …။
အဲ.. နောက်ဆုံးကြတော့ အဲဒီဥဟာ ခွပ်ကနဲ ပေါက်ပါလေရောတဲ့ ..။ ကွဲလဲကွဲ ရောဥခွံထဲကနေပြီး ဘဲကလေးတစ်ကောင်ဟာ ကျစ်ကျစ်-ကျစ်ကျစ် မြည်ပြီးထွက်လာတယ် . ဒီဘဲကလေးက ကြီးလဲ အတော်ကြီးသတဲ့ ။ အရုပ်ကလဲ အတော်ဆိုးသတဲ့ ..။သူ့အမေ ဘဲမကြီးကတောင် ငါ့သားသမီးတွေထဲမှာ အတော်အရုပ်ဆိုးတဲ့ ဘဲလေးပဲလို့ ပြောယူရသတယ် ။
ဒါနဲ့ ဘဲမကြီးက ဘဲလေးတွေအားလုံးကို ဘဲခြံထဲခေါ်သွားတော့ အရုပ်ဆိုးတဲ့ ဘဲလေးလဲ လိုက်သွားရတယ် ။ ဘဲခြံကတော့ သူ့ကို အရုပ်ဆိုးလွန်းလို့ အခြားဘဲတွေက ၀ိုင်းစကြတယ်ပေါ့ ။ ပြောင်လှောင်ကြတယ် ပေါ့ ။သူ့အမ အရင်း ၊ အကိုအရင်း ဘဲတွေကတောင် နင့်ကို ကြောင်ချီသွားပါစေလို့ ဆုတောင်းကြတယ် ။ ဘဲရုပ်ဆိုးလေးမှာ နေစရာတောင် မရှိဘူးတဲ့ ။ ဘဲစာကျွေးတဲ့ ကောင်မလေးကလဲ သူ့ကိုကန်တယ် ။ ဘဲအချင်းချင်းကလဲ သူ့ကိုထိုးကြတယ် ။ ကြက်တွေကလဲ သူ့ကိုလာဆိတ်တယ် ။
ဒါနဲ့ဘဲရုပ်ဆိုးလေးဟာ ဘဲခြံထဲကနေထွက်ပြေးပြီး တောထဲမှာ ရှိတဲ့ ကျင်းကြီးထဲ သွားနေတယ် ။ နောက်ဒီကျင်းထဲမှာလဲ စကားခပ်ကြွားကြွားပြောတတ်တဲ့ ဘဲငန်းတွေနဲ့လဲ တွေ့သေးသတဲ့ ။ ဒီကျင်းထဲမှာ တောငန်းတွေကို လာပစ်တဲ့ သေနတ်သံတွေကြောင့် ဘဲရုပ်ဆိုးလေးလဲ ဆက်ပြီးထွက်ပြေးသွားရပြန်ပါရောတဲ့ ။ ဒါနဲ့ပဲ တဲတစ်ခုကို ရောက်သွားရရှာပြန်ပါတယ် ။
တဲထဲရောက်တော့ လေတွေက သိပ်တိုက်နေ သတဲ့ ။တဲထဲ မှာအဖွားကြီးတယောက် နေသတဲ့ ။ အဖွားကြီးမွေးထားတဲ့ ကြောင်တစ်ကောင်နဲ့ ကြက်မ တစ်ကောင်လဲ ရှိသတဲ့ ။ ကြောင်ကလဲ သူ့လို တညောင်ညောင်နဲ့ အော်ခိုင်းသတဲ့ ။ ဘဲရုပ်ဆိုးလေးက မအော်တတ်ပါဘူးဆိုတော့ သူ့ကို ဆူသတဲ့ ။ ကြက်မကလဲ ဘဲရုပ်ဆိုးလေးကို ဥ. ဥခိုင်းသတဲ့ ။ မဥတတ်ပါဘူးဆိုတော့ ကြက်မကလဲ သူ့ကို ဆူသတဲ့ ။ ဘဲရုပ်ဆိုးလေးလဲ ဘယ်ပျော်ရှာမတုန်း ။
ဒါနဲ့ ဒီတဲလေးထဲမှာ မနေတော့ပဲ ဘဲရုပ်ဆိုးလေးဟာ ပြန်ထွက်လာသတဲ့ ။ ပြီးတော့ ရေကန်ထဲမှာ ရေငုပ်လိုက် ၊ ကူးလိုက်နဲ့ ပျော်နေရှာ တယ် ။ ဒါပင်မဲ့ အရုပ်ဆိုးလွန်းလို့ အခြားကောင်တွေက သူ့ကို စကားတောင်လာမပြောကြဘူး ။
ဒီလိုနဲ့ပဲ ဆောင်းတွင်းရောက်လာပါလေရော ။ ဆောင်းတွင်းရောက်လာတော့ သူနေတဲ့ ရေအိုင်လေးဟာ ရေခဲသွားသတဲ့ ။ ဘဲရုပ်ဆိုးလေးဟာ ရေခဲထဲမှာပဲ အအေးမိပြီး မေ့ပြောသွားရှာတာပေါ့ ။ လယ်သမားကြီးတယောက်က ဘဲရုပ်ဆိုးလေးကို အိမ်ကို ယူသွားတယ် ။ အိမ်ရောက်တော့ ဘဲရုပ်ဆိုးလေး သတိရလာတယ် ။ ကလေးတွေက သူနဲ့ ကစားချင်ကြတယ် ။ ဒါပင်မဲ့ ရုပ်ဆိုေးလးဟာ လန့်ပြီးခုန်လိုက်တာနဲ့ ဘဲရုပ်ဆိုးလေးဟာ နွားနို့ခွက်ထဲ ကျသွားသတဲ့ ။ နောက်အိမ်ရှင်က အော်တော့ ထပျံလိုက်တာ ထောပတ်ပုံးထဲ ကျပြန်ရော …။ အဲဒီနောက် ဂျူံမှုန့်ပုံးထဲ ထပ်ကျပြန်ရောတဲ့ ။ ဒါနဲ့ပဲ ဘဲရုပ်ဆိုးလေးဟာ ပိုပြိးအရုပ်ဆိုးသွားရှာတာပေါ့ ။ ဘဲကလေးတွေက လိုက်ပြီး စကြ ၊ နောက်ကြ ၊ အိမ်ရှင်အဖွားကြီးက နောက်ကလိုက်ရိုက်နဲ့ ၊ ဘဲရုပ်ဆိုးကလေးမှာ အတော်ပြေးထွက်ခဲ့ရရှာတာပေါ့ကွယ် ။
ဒီလိုနဲ့ပဲ ဆောင်းတွင်းတစ်ခုလုံး နှင်းတွေထဲမှာပဲ ဘဲရုပ်ဆိုးလေးနေရှာတယ် ။ သိပ်ချမ်းတာပေါ့ ၊ ဆင်းဆင်းရဲရဲ နေရရှာတာပေါ့ကွယ် ။
ဒါနဲ့ပဲ ဆောင်းရာသီကုန်သွားသတဲ့ ။ နွေဦးပေါက်လာပြီပေါ့ ။ ရာသီဥတုက နွေးလာတာပေါ့ ။ ဘဲလေးရဲတောင်ပံ တွေကလဲ သိပ်ပြီး သန်မာလာတယ် ။ ဒါနဲ့ပဲ ဥယျာဉ်တစ်ခုရဲ့ ရေအိုင်ထဲမှာ ရေကူးနေတုန်း သူ့ရှေ့မှာ သိပ်လှတဲ့ ငန်းကြီး သုံးကောင် ကိုတွေ့ရသတဲ့ ..။ အဲဒီ ငန်းကြီးတွေဟာ သိပ်လှသတဲ့ ။ ရေထဲမှာ ပေါ့ပေါ့လေး မျှောလိုက်နေကြတယ် ။
ဘဲရုပ်ဆိုးလေးက ငါ့ကို ငန်းလှလှကြီးတွေက သတ်ချင်လဲ သတ်ပါစေ ၊ ငါ့ကို ကြက်တွေ ၊ ကြောင်တွေ ၊ ကောင်လေးတွေရဲ့ ကန်တာ ထိုးတာခံရတာ ထက်သေတာက ကောင်းတယ် ” လို့တွေးတာပေါ့ ..။ ဒါနဲ့ ဘဲလေးဟာ ငန်းတွေဆီကိုသွားသတဲ့ ။ငန်းတွေကလဲ ဘဲလေးကိုမြင်တော့ အမြန်လာကြတယ် …။ ဘဲလေးက ကျွန်တော့ကိုသတ်ပစ်ကြပါ ” လို့ပြောပြီး ခေါင်းငုံ့ပေးလိုက်တယ် ။ အဲ… ထူးတာက ဘဲလေးခေါင်းငုံ့လိုက်တော့ ဘာကိုမြင်သလဲ ဆိုရင် သူ့ကိုယ်သူ ပြန်မြင်ရသကိုး ။ဒါပင်မဲ့ သူမြင်ရတာက အရုပ်ဆိုးတဲ့ ဘဲလေးမဟုတ်ပဲ သိပ်လှတဲ့ ငန်းလေးတစ်ကောင်ဖြစ်နေသတဲ့ ။
တကယ်တော့ သူဟာ ဘဲခြံထဲမှာ ပေါက်ရတဲ့ ငန်းလေးဖြစ်နေတာကိုး ။ ကလေးတွေ နဲ့ ငန်းတွေဟာ သူ့ကို အလှဆုံး ငန်းလေးဟေ့ ” လို့ချီးကျူးကြသတဲ့ ..။ တကယ်ပဲ သူဟာ အလှဆုံးငန်းကလေးပဲတဲ့ …။ သူ့ကို ၀ိုင်းပြီးကြည့်ကြ ၊ ချီးကျူးကြတယ် ။ သူကလဲ ၀မ်းသာပင်မဲ့ မာနမကြီးရှာဘူး ။ သူဆင်းဆင်းရဲရဲ နေခဲ့ ရတာကို ပြန်ပြီး သတိရနေမိတာပဲ တဲ့ ။
အားလုံးက ချီးကျူးကြတဲ့ ၊ သိပ်လှတဲ့ ငန်းလေးဟာ ခုတော့ ရေကန်ထဲမှာ အေးအေးဆေးဆေး လှလှပပ ကြီး ကူးခတ်နေတော့သတဲ့ ကွယ် ။
ကိုကိုဇေ ရေ….ဘဲရုပ်ဆိုး ပုံပြင်လေးက ဒါပါပဲ ကွယ် ။ ။
ပုံပြင်ထဲမှာ လူတိုင်းကိုပြောပြချင်တဲ့ မက်ဆေ့ခ်ျ လေးတစ်ခုရှိတယ် ဇေ ။ ဆရာမကြီး မလုပ်တော့ပဲ ပုံပြင်လေးကို ဖတ်ပြီး လိုရာဆွဲတွေးနိုင်ပါတယ် …။
Posted by နှင်းမိုး at 9:17:00 pm
ဆရာမဆိုတော့ ပုံပြင်ပြောလည်း လေ့ကျင့်ပေါ့နော်..။
ပုံပြင်လေးလာနားထောင်သွားတယ် တစ်ပတ်လောက်တော့ ပျောက်နေဦးမယ်နော်
ဇေရော ညီမ နှင်းမိုးမိုးပါ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ပါစေ..